बहालवाला मन्त्रीले नै भने– मधेस विभेदमा परेको छ, संघर्ष गर्नुपर्छ
रोल्पाः सिँचाइ मन्त्री एवं एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य उमेशकुमार यादवले अहिले पनि मधेस विभेदमा परेको दाबी गरेका छन् । उनले तराईमधेसमा जारी आन्दोलन विभेदका विरुद्ध भएको पनि दाबी गरे । तर, आन्दोलनको अगुवाई उचित व्यक्तिहरुबाट नभएको भन्दै घुमौरो पाराले आलोचना गरे । ‘तराई मधेसको आन्दोलन अगुवाई कस्ता–कस्ता व्यक्तिले गरिरहेका छन् त्यो पनि..
एमाओवादी स्थायी समिति बैठक स्थगित, वैद्यसँग नरम बन्दै प्रचण्ड
काठमाडौंः एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा बसेको उक्त पार्टीको स्थायी समिति बैठक..
काठमाडौँः सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (एमाले)को नवौँ महाधिवेशन २०७१ असारमा..
काठमाडौः पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतको राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा पनि दलगत स्वार्थ..
अमेरिका, वेलायत र जापानका युवाको सपना नेपाल बन्नुपर्छः विष्ट
काठमाडौँः नेकपा (एमाले) सचिव एवं मोर्चाफाँट इञ्चार्ज गोकर्ण विष्टले नेपालमा संभा..
मनमोहन कब्जा गर्न शीर्ष नेताकै यस्तो हर्कत !
काठमाडौँः नामै सुन्दा पनि श्रद्धाले शिर निहुरिने पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी १७ स्मृति दिवस मनाइरहँदा उहाँकै नाममा स्थापित मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानमा भने एमालेको गुट राजनीतिको घिनलाग्दो उदाहरण देखिएको छ १७ वर्षदेखि आफ्नो निजी सम्पत्तिजस्तो गरेर प्रतिष्ठान अँठ्याएर बसेका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले त्यसलाई बैधा..
काठमाडौँः सर्पलाई दूध खुवाएर पाल्यो भने त्यसले एक दिन दूध खुवाउनेलाई नै डस्छ भन्ने नेपाली भनाई अहिले एमाओवादीका केही नेतामा लागु भएको छ । कुनै समय पक्का राजावादी लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँन मरिहत्ते गर्ने एमाओवादीका केही नेतालाई अहिले लोकमानको छाँयाले तर्साउन थालेको छ । त्यति मात्र होइन लोकमानबाट बचाई दिनु प¥यो ..
बातबहादुरहरुले काम गर्न दिएनन्ः प्रधानमन्त्री
चौतारा । गत वर्ष वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट सर्वसाधारणका क्षतिग्रस्त निजी आवासको पुनर्निर्माणको कार्य सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा नगरपालिका वडा नं. ३, स्याङबोस्थित सर्बे तामाङको भूकम्प प्रतिरोधी घरको शिलन्यास गरेर अभियान सुरु गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा पीडित..
बालाजुमा दास आतंक
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित र बदनाम हुँदै आएका डिएसपी सञ्जीव शर्मा दासले बालाजु वृत्तको इन्चार्ज भएदेखि त्यस क्षेत्रमा आतंक नै मच्चाएका छन् । अदालतले हेर्नुपर्ने र प्रहरीले हेर्न नपाउने व्यक्तिगत लेनदेनका मुद्दाहरू पनि पछिल्लो समय वृत्तबाटै हेर्न थालेको र पक्षहरूसँग रकमको मोलतोल गर्न थालेको एक पीडितले बताए । उपत्यकाका आकर्षक..
काठमाडौं । पटकपटक सारिँदै आएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन अन्तिम समयमा मंगलबार फेरी स्थगित गरिएको छ । ट्रेड युनियनको निर्वाचन गत चैत २८ गते तोकेर सम्पूर्ण तयारी अघि बढिसकेपछि पनि एमाओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले चुनावमा हार्ने डरले अवरोध गरेको थियो । त्यसलगत्तै उक्त निर्वाचन स्थगित गरेर व..
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका बहालवाला र अवकाश प्राप्त प्रत्येक सदस्यहरुले जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दै अनिवार्य रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि कल्याण कोष विवादमा तानिएको छ । कोषका इन्चार्ज एसएसपी लब विष्टले महत्वकांक्षी उक्त प्रस्ताव ल्याएर घर जाने बेलामा आफू मालामाल हुन खोजेको भन्दै प्रहरीभित्रै विवाद उत्पन..
शारदा भुसाल पागल हुन, उनको घृणित साहित्य जफत होस्ः मोदनाथ प्रश्रित
चैत २ । अर्घाखाँचीकी शारदा भुसालले पूर्व मन्त्री एवं पूर्व एमाले नेता मोदनाथ प्रश्रितलाई घृणित आरोप लगाएपछि प्रश्रितले त्यसको खण्डन गरेका छन् । सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रश्रितले आरोपको खण्डन गरेका हुन् । ती महिलाले प्रश्रितलाई करिब २४ वर्ष अघि आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै एक पुस्तक प्रकाशन गरी आरोप लगाएपछि उनले त्यस..
मधेसी मोर्चाका नेतालाई भारतीय विदेश सचिवले के भने ?
काठमाडौं। भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भेटेर वार्तामा भएका प्रगतिबारे चासो राखेका छन् । सार्क सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आएका भारतीय विदेश सचिव जय शंकर मंगलबार राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त छन् । उनले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भेटेर सरकारसँगको वार्ता र सहमतिको प्रयास कहाँ पुग्यो रु मोर्चाले के सो..
अझ् नयाँ शक्ति निर्माण अभियन्ताका लागि बनाइएको टोपीको रङ त सेतो नै रोजियो ।
नयाँ शक्ति निर्माण अभियानका क्रममा उनले रातो रङ खासै प्रयोग गरेका छैनन् ।
जानकी मन्दिर क्षेत्र तनावग्रस्त, प्रहरी चौकीलाई लक्षित गरी पेट्रोल बम प्रहार,
जनकपुरधाम– प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपका कारण जानकी मन्दिर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ ।
पाण्डे बहुचर्चित युनिटीकाण्डमा पनि मुछिएका थिए । युनिटीको धन्दा फस्टाइरहेका बेला ‘चार करोड रुपैयाँ र एउटा रेन्ज रोभर गाडी नदिएमा युनिटीको धन्दा बन्द गराउने धम्की दिँदै मोलमोलाइ गरेर पैसा असुलेको’ आरोप उनीमाथि लागेको थियो । अर्थमन्त्री हुँदा पाण्डेले पाँच करोड नगद र अन्य जिन्सी सामान युनिटीसँग लिएको आरोप स्वयं एमालेकै कार्यकर्ताल..
संविधान संशोधन बाहेक अर्को विकल्प छैन : उपप्रधानमन्त्री गच्छदार
सहयोग गर्छु : पाण्डे यस विषयमा मेरो खास कमेन्ट केही छैन । अख्तियारले मागेको विवरण पेस गर्छु । सम्मानित निकायलाई सहयोग गर्छु । अख्तियारले पत्र काटेलगत्तै पाण्डेले आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए । भरतपुरमा मंसिर २० गते पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै पाण्डेले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू सबैलाई थाहै छ, गत वर्ष अर्थ समितिले उहाँ (कार्की) लाई बोलाउ..